I-Apple iyiphumezile kwaye sele idlule kwi-800.000 yezigidi zeedola kwiimali ezinkulu okokuqala ngqa | Ndisuka mac
Ngaphandle kwamathandabuzo iApple ayinayo imida kwaye emva kokuba ikufutshane nokufikelela kwi-800.000 yeedola emini izolo, iCupertino ivale ngokusesikweni ngaphezulu kweli nani. I-Apple Inc iye yaba yinkampani yokuqala eMelika ukuya vala iseshoni ngexabiso lentengiso elingaphezulu kwe-800.000 yezigidi zeedola, ukugqitha uphawu lwe-700.000 yezigidigidi olwalupasile kwiminyaka emibini edlulileyo. Ngokuqinisekileyo la ngamaxesha amahle eApple, ebonakala ngathi inento yonke ebonakalayo ukuba ibe nonyaka wembali, ucinga ukuba iindaba zayo azisezi.
Ukukhula kuka-Apple kule minyaka idlulileyo kumangalisa ngokwenyani kwaye asinakuthi iziphumo azihambelani ngaphandle kokugxekwa okanye ingeniso ephezulu kakhulu efunyenwe kule kota yokugqibela. Ngokwenyani iApple ingaphezulu kwako konke oku kwaye zingaphezulu kweepesenti ezingama-33 kulo nyaka kwaye phantse iipesenti ezingama-50 ukusukela kunyulo lukaMongameli wase-US ngo-Novemba. I-Apple sele i-akhawunti yeepesenti ezi-4 ze-S & P 500 Index yeemali ezinkulu ezingama- $ 21,7 trillion.
Kuya kufuneka siyicacise into yokuba umlamli wabahlalutyi beApple ikwi- $ 160 yesabelo, xa kuthelekiswa ne- $ 140 abayiqikeleleyo kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo. NgoLwesibini odlulileyo bavale isitokhwe nge- $ 153,99. Imali yentengiso ngexesha leseshoni yorhwebo izolo yi- $ 802.800 yezigidigidi, idlula iMveliso yaseKhaya yaMazwe angama-45 kwangama-50 aseUnited Statesngaphandle kweIllinois, iFlorida, iNew York, iTexas neCalifornia. Ngaphandle kwamathandabuzo, sijamelene namanani amangalisayo kwaye kulindeleke ukuba aqhubeke nokukhula kwakulo nyaka nakulo uzayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » I-Apple iyiphumezile kwaye sele idlulile kwi-800.000 yezigidi zeedola ze-capitalisation okokuqala
UApple ufumana iBeddit, ubuvulindlela bokuqalisa ukulandela umkhondo wokulala